Britain Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Inay U Safraan Soomaaliya. | Awdalmedia.com
Xafiiska Arrimaha Dibadda Britain ayaa soo saaray digniin iyo talooyin ku socota Muwaadiniintooda inay u safraan Soomaaliya iyo deegaanada Somaliland, iyadoo loogu baaqay muwaadiniinta ku sugan inay isaga tagaan.
Qoraal la soo dhigay Bogga Xafiiska Arrimaha Dibadda iyo barwaaqo sooranka ayaa waxaa lagu wargeliyay Muwaadiniinta Britain inay ka taxadaraan goobaha dadka isugu yimaadaan, si looga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara. isla markaana ay si degdeg ah uga tagaan goobaha bulshada ku badan tahay.
“Argagixisadu waxay u badan tahay inay isku dayaan inay weeraraan Soomaaliya, Waxaa jira khatar aad u wayn oo afduub ah, Kooxaha argagixisada ah waxay u hanjabeen reer galbeedka iyo kuwa u shaqeeya ururada reer galbeedka. Waxaa jira halis joogta ah oo weerar argagixiso ah oo ka dhaca Muqdisho iyo argagixisadu waxay sii wadaan qorshaynta weerarrada ka dhanka ah reer galbeedka ee Soomaaliya inteeda kale oo ay ku jiraan Somaliland”ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xafiiska Arrimaha Dibadda Britain.
Sidoo kale waxaa la sheegay inay jiraan qatar kale oo ka imaan karta Baddaha, gaar ahaan biyaha caalamiga ama Gacanka Cadan iyo Badweynta Hindiya oo ay burcad badeedka ka fuliso weeraro afduub ah.